Tuesday October 15, 2019 - 11:46:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
(Rating 1.5/5 Stars) Total Votes: 18
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay qaaddayso tallaabo ay ku burburinayso dhaqaalaha wadanka Turkiga haddii uu sii wado duullaanka uu ku qaaday Maleeshiyaadka Kurdiyiinta wadanka Suuriya.
Donadl Trump ayaa sheegay in cunaqabateymo dhanka dhaqaalaha ah uu kusoo rogay wasaaradaha ugu muhiimsan wadanka Turkiga wuxuuna ku hanjabay xayiraado dheeraad ah haddii Turkigu uu joojin waayo duullaanka Kurdiyiinta.
Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Trump uu go'aansaday in Turkiga dhaqaale ahaan uu uwiiqo waxaana xayiraado adag ladul dhigay illaa sedax wasaaradood oo laf dhabar u ah dowladda Turkiga kuwaas oo kala ah wasaaradda Arrimaha gudaha,wasaaradda Difaaca iyo wasaaradda Tamarta.
Mareykanku wuxuu sheegay in lamamnuucay in sedaxda wasaaradood ee cunaqabataynta lagusoo rogay wax macaamil ah ay la sameeyaan shirkadaha iyo Bankigayada kuyaal gudaha dalka Mareykanka.
Labada Xisbi ee Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga ayaa isku raacay in cunaqabateymo adag ladul dhigo nidaamka Turkiga oo ay ku eedeeyeen in uu wiiqay awoodda Mareykanka ee guda Suuriya.
Melleteriga Turkiga ayaa isbuucii lasoo dhaafay qaaday duullaan ka dhan ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee waqooyiga iyo Bariga Suuriya, Erdogaan oo ah madaxweynaha Turkiga ayaa duullaanka ciidamadiisa ee Suuriya ku sheegay tallaan uu ku sugayo amniga wadankiisa.